အမေ့မျက်နှာ တစ်ရွာထင်ပါလို့ . . လိုက်ခဲ့တယ် . . လိုက်ခဲ့တယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အမေ့မျက်နှာ တစ်ရွာထင်ပါလို့ . . လိုက်ခဲ့တယ် . . လိုက်ခဲ့တယ်
အမေ့မျက်နှာ တစ်ရွာထင်ပါလို့ . . လိုက်ခဲ့တယ် . . လိုက်ခဲ့တယ်
Posted by မောင်ရိုး on Jan 21, 2017 in Creative Writing | 14 comments
မယုံရင် ပုံပြင် မှတ်
“” လှည်းတန်း . . သမိုင်း . . အင်းစိန်ပန်းခြံ . . ”
“အင်းစိန်ပန်းခြံအထိရောက်မယ် . . အခမဲ့ . . အခမဲ့ . . . ”
အထက်ပါအသံမှာ မောင်ဆာမိတစ်ယောက် အာခေါင်ဖြဲ၍အော်လိုက်သောအသံဖြစ်သည် ။
မောင်ဆာမိသည်ကား လိုင်းကားဆွဲနေလေပြီ ။
ကြားကားမဟုတ် ။ YBS မဟုတ် ။
အခမဲ့ စာတန်းများ ပတ်လည်ကပ်လျှက် ဆူးလေရင်ပြင်၏လူစည်ကားရာကားမှတ်တိုင်တွင် ဝင်ရောက်ရင်းအော်လိုက်သောအသံဖြစ်လေတော့သည် ။
“ဘယ်ရောက်မလဲ ဘယ်ရောက်မလဲ . ”
” ပန်းခြံ. . အင်းစိန်ပန်းခြံအထိ ”
မေးသူကမေး၏ ။ ပြေးလာသူက ပြေးလာ၏ ။
တချို့က စဉ်းစားသယောင်ပြုသည် ။ တချို့က လှည့်ပြန်သွားသည်။
မကြာပါ YBS တီရှပ်များဝတ်ထားသည့် မောင်မယ်လေးများရောက်လာကြသည် ။
မော်တော်ပီကယ်ယဉ်ထိန်းများမှလည်း အသံချဲ့စက်အသေးစားလေးဖြင့် လူအုပ်ကြီးအားထိန်းကျောင်းလျှက် သက်ဆိုင်ရာကားများပေါ်သို့တင်ပေးကြသည် ။
ဤသည်ကားးးး Journey to the hell ဇတ်လမ်းတွဲ၏ တတိယမြောက်အပိုင်းပင်ဖြစ်လေတော့သည် ။
မဟာဖွဘုတ်တော်ကြီးသည်ကား မြန်မာပြည်အတွက်ဆိုရသော် စွယ်စုံကျမ်းကြီးသဖွယ်ဖြစ်လေ၏ ။
မကြာမကြာဆုံးမသြဝါဒများလည်းဖတ်ရသည် ။ အတင်းသတင်းအစုံ မြည်းစမ်းရပေလိမ့်မည် ။နိုင်ငံရေး လူမှုရေးနှင့်စည်းပွါးရေးမှအစ အိမ်ထောင်ရေးပါမကျန် ဆောင်ရွက်နိုင်လေ၏။ အကယ်၍ ဝါသနာပါလျှင် ရုပ်ရှင်ပေါင်းစုံကိုလည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပေသည် ။
ထို့ကြောင့် မောင်ဆာမိတစ်ယောက် မဟာရန်ကုန်နှင့်ဝေးရာတွင်ရောက်ရှိနေသော်ငြား မဟာဖွဘုတ်တော်အစွမ်းဖြင့် အောက်ပါဇတ်လမ်းတွဲများကိုရင်သပ်ရှုမော ကြည့်ရှုခဲ့ရပါလေတော့သည် ။
သမိုင်းဝင် မထသတော်လှန်ရေးကြီးကိုအကြောင်းပြု၍ 16 . 1 .17 နေ့တွင် . .
Bus to Yangon အားလည်းကောင်းးး ၊
ထိုနေ့ညနေပိုင်းတွင် ဆူးလေရင်ပြင်ကိုနောက်ခံထား၍ရိုက်ကူးထားသော. .
Journey To The Hell ဇတ်လမ်းတွဲကိုလည်းကောင်း ၊ 17. 1.17 နေ့နံနက်ပိုင်းတွင် BM Return ကိုလည်းကောင်း ၊ အဆိုပါနေ့ညဦးပိုင်းတွင် Night of the City Hall ကိုလည်းကောင်း ကြည့်ရှုခံစားရင်း . . “” ဟာာ !! “” “” ဟင်င် !! ” “” တောက်စ် !!” ” ကျွတ်စ်!! ” ” . .
ဟူသော အာမေဒိတ်များ ပြုလျှက် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ခိုင်မာစွာချလိုက်ပါလေတော့သတည်းးးးး ။
မထသ တော်လှန်ရေးကြီးကား အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ပေါက်ကွဲနေလေပြီ ။
ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များတွင် YBS တပ်သားများက စီးနင်းဝင်ရောက်နေရာယူထားကြလေ၏ ။
မဟာရန်ကုန်၏ လေးပြင်လေးရပ်သောဌါနများမှ ပရဟိတကားတန်းကြီးများသည်လည်း ဆူးလေရင်ပြင်သို့ အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ချီတက်နေသည် ။
လူတိုင်း၏ မျက်နှာများတွင် YBS အောင်ရမည်ဟု ယုံကြည်ချက်များထင်ဟတ်လျှက် . . . .
ရင်ထဲတွင် ကိုယ်စီကြေွးကြော်နေသည်ကားးးး “” We were Kwi Phyo “” ဟူ၍ . . . . . ။
ဤသို့လျှင် မောင်ဆာမိတစ်ယောက်သည်လည်း အဆိုပါတော်လှန်ရေးကြီး၌
“Transporter ” ဇတ်လမ်းတွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့လေတော့သည် ။
၁၅ ယောက်သာတင်ဆောင်နိုင်သော ကားပေါက်စလေးဖြင့် အခမဲ့ စာတမ်းများကပ်ပြီးလျှင် ဆူးလေရင်ပြင်သို့ ဝင်လာခဲ့သည် ။
ညနေ ၄ နာရီခွဲ သာသာခန့်ဖြစ်သဖြင့် YBS မော်တော်ယဉ်များသည်လည်း နိုင်နိုင်နင်းနင်းဖြင့်တင်ဆောင်နေကြသည် ။
အခမဲ့ ကားများကားးးးး အနြေ္ဒကြီးစွာရပ်ရင်း မကြာမီတွင် ဖြစ်ပေါ်လာလတံ့သော Journey to the Hell ဇတ်လမ်း တတိယပိုင်းအတွက် တိတ်တဆိတ် ပြင်ဆင်နေတော့သည် ။
အချိန်ကား နေစောင်းလေပြီ ။
YBS ဘတ်စ်ကားများလည်း တဖြည်းဖြည်း အဝင်ကျဲလာ၏ ။
ရုံးအပြန် လူအုပ်ကြီးသည်လည်း တစ တစ ပို၍ တိုးပွါးလာသည် ။
ဆူးလေရင်ပြင်ကားးး လူမုန်တိုင်းဖြင့် သွက်သွက်ခါစပြုလေပြီ ။
ဟိုမှ ဒီမှ ပြေးလွှားကြရင်း အိမ်အပြန် ရုံးအဆင်းမှာ သီချင်းမဆိုနိုင်တော့ပြီ . . ။
စောင့်မျှော်နေသူ သမီးသားတို့ရုပ်ပုံလွှာကိုတွေးရင်း မုန်တိုင်းစင်ယော်တို့ ပြန်ကြပေတော့မည် ။
အပူရုပ်ကိုဟန်လုပ်ရင်း သိန်းစွန်ငှက်တို့၏ မျက်လုံးမျိုးဖြင့် အပြန်ဘတ်စ်ကားကိုရှာကြသည် ။
ရုတ်တရက် . . . .
ဆူးလေအဝိုင်းကိုကွေ့ဝိုက်၍ မော်တော်ယဉ်တန်းကြီးဝင်ရောက်လာကြသည် ။
အလို!! ဘာကားတွေပါလိမ့် ? ?
နံပါတ်အပြာ တပ်ဆင်ထားသော ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ ဇိမ်ခံလေအိပ်ကားများ ၊ နံပါတ်အနီတပ်ဆင်ထားသော ဘုရားဖူးအငှါးယဉ်များနှင့် ဟိုင်းဝေး အိပ်စပရက်ကားများ ၊ နံပါတ်အနက်တပ်ဆင်ထားသော ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယဉ်များ ၊ အခမဲ့ စာတမ်းကပ်ထားသော အငှါးယဉ်များ. . . . . .
ဧကန္တ သိကြားမင်းကြီး၏ ပဏ္ဍုကမ္ဗလာ မြကျောက်ဖျာတော့ ပူနေပြီထင့် . . ။
မဟုတ်မှလွဲရော . . ဖိုးသိကြားအမိန့်ဖြင့် ကားများရောက်လာလေရော့သလား ???
ဒီလောက်တော့ဖြင့် သိကြားကူစရာမလိုပါ ။
အမေ့မျက်နှာ တစ်ရွာထင်ပြီး လိုက်ခဲ့သူတွေဖြစ်သည် ။
ဒါးတောင်ကိုလည်းကျော်ရဲသည် ။မီးပင်လယ်လည်းဖြတ်ရဲသည် ။ ယုတ်စွအဆုံး ချီးပုံတွေ့လည်းနင်းရဲသည် တမုံ့ . . ။
ပြည်သူသည် နိုင်ငံ၏ခွန်အားဖြစ်သည် ။ပြည်သူဆင်းရဲလျှင် နိုင်ငံလဲမွဲပေလိမ့်မည် ။
ပြည်သူအချင်းချင်းမှ မစောင့်ရှောက်လျှင် မည်သူကစောင့်ရှောက်မည်နည်း ။
ဤသည်ကားးး . . မြန်မာပြည်သားတို့၏ စိတ်ဓတ်ပင်ဖြစ်လေသည် ။
ခေတ်အဆက်ဆက် ကိုယ့်ဝမ်းကိုယ်ကျောင်း၍ ကိုယ့်အသက်ကိုယ်ဆက်ခဲ့ကြရသည် ။
ဒီလောက်တော့ဖြင့် မမှု ။
သို့နှင့် . . မောင်ဆာမိလည်း အင်းစိန်ပန်းခြံ အထိ ခရီးစဉ်စတင်ခဲ့သည် ။
၁၅ ယောက်စီးကားလေးအားလူ၂၀ ကျော်ခန့်တင်ဆောင်ပြီးနောက် လီဗာတံအားဖနောင့်နှင့်ကြိတ်ရတော့သည် ။
2700cc အင်ဂျင်သည် ငယ်သံပါအောင်အော်ညီး၍ ရုန်းကန်နေလေပြီ ။
လမ်းတစ်လျောက် တက်သူတက် ၊ ဆင်းသူဆင်း ၊ လာသူလာ သွားသူသွား but I go on forever . . .
အငိုမျက်လုံးအပြုံးမျက်နှာများဖြင့် ကျေးဇူးတင်စကား အထပ်ထပ်ပြောကြသည် ။
မည်သူကမျှ အပြစ်မဆို ။ ဒီခရီးဒီလမ်းအတွက် အမေ့ကိုယုံမှတ်၍ ပုံအပ်ခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား . . .။
ကံကောင်းလျှင် အခမဲ့ကားဖြင့်တိုးမည် ။ (c/d to အမတ်မင်း /ဘလက်ချော)
အင်းစိန်ပန်ခြံသိုရောက်တော့ လူအုပ်ကြီးနှင့်ထပ်တွေ့ရပြန်သည် ။
လှိုင်သာယာ ရွှေပြည်သာသို့ ပြန်မည့်သူများဖြစ်သည် ။
သို့သော် ဆက်ပြီးမပို့နိုင်တော့ပါ ။
ဆူးလေရင်ပြင်သို့ တစ်ခေါက်ပြန်ရဦးမည် ။
“နောက်တစ်ခေါက်လာခဲ့မယ်”ဆိုသောကတိစကားအား ချိုးဖေါက်၍မဖြစ်သေး ။
နှမ်းတစ်စေ့ဖြင့် ဆီကြိတ်ရပေဦးတော့မည် .. . . .။
ရန်ကုန်ဆောင်းသည် စိမ့်စိမ့်လေးအေးနေလေပြီ ။
ထို့အတူ တော်လှန်ရေးကာလလွန်မြောက်ပြီးပါကလည်း ရန်ကုန်ဆောင်းကဲ့သို့ အေးချမ်းစေချင်မိသည် ။
ဆူးလေသို့ ပြန်ဆန်တက်သောလမ်းတွင် သက်ပြင်းတစ်ချက် တိတ်တိတ်ရှိုက်မိသည်လား ဆိုသည်ကိုတော့ . . . .
ဤသည်ကား 16. 1. 2017 နေ့တွင်စတင်ခဲ့သော မထသ တော်လှန်ရေးကြီးတွင် BSA တပ်မတော်(Bus Service Association ) တပ်သားလေးအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သော မောင်ဆာမိ၏ ကြုံရဆုံရ တခဏတာပင်ဖြစ်ပေတော့သည် ။
ဓတ်ပုံယူသုံးခွင့်ပြုပါသော မဝေ Wei Wei
စာသားများအားအသုံးပြုခွင့်ပေးပါသော ကိုဘလက်ချောနှင့် အမတ်မင်းတို့အား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းးးး
၁၅ ယောက်စီးကားကို လူ ၂၀ တင်တယ် over weight နဲ့ဖမ်းမယ် P:
အရေးအသားကတော့ စာရေးဆရာတွေ ရှုံးလောက်ပြီနော်။
တကယ် ယုံမှတ်လို့ ပုံအပ်ခဲ့သူတွေက မညည်းလှပါဘူးး
ပုံအပ်ချင်ယောင်ဆောင်တဲ့သူတွေက အခွင့်လည်းသာရော ပိုးစိုးပက်စက်ရောချပြောဆိုနေကြတာလေးက အမြင်ကပ်စာကောင်းနေတာ။
အရင်အစိုးရလက်ထက်တုန်းက အရမ်းအဆင်ပြေတဲ့ ကားလိုင်းတွေ စီးခဲ့ရတာဆိုတော့လေ။ ငိငိ။
အမေ့မျက်နှာ ”ရွာ”ထင်တယ်ဆိုကတည်းက မှားနေကြတာ။
အမှန်က ကမ္ဘာ ထင်ရမှာ။
ရွာပဲ ထင်တော့ ရွာလည်နေရော
မှန်တာပြောရရင် ၊ အမေ့မျက်နှာကို တစ်ရွာမထင်ခဲ့ပါဘူး ။
၁ ။ ဟိုဖက်က လူ့အောက်တန်းစား စစ်အာဏာရှင်ကို မုန်းတာရယ် ။
၂ ။ ဒေါ်စုကို ပျော့တယ်လို့ထင်ပေမယ့် ခုထိ သိပ်မမှားသေးတာရယ် ။
ွှ၃ ။ ဒေါ်စုဟာ စစ်အာဏာရှင်ကို ဖယ်ရှားဖို့ အကြီးဆုံး အင်အား ဖြစ်နေတာရယ် ။
ဒါနှင့်ဘဲ ဒေါ်စု ကို ( အားနာပါးနာ နှင့် ) ထောက်ခံပေး မိတာပါ ။
( ဒေါ်စု နောက်ကို လိုက်နေတာ မဟုတ်ပါ )
အရင်ပတ်ကလည်းမွန်လေးစီးကြည့်တယ် ybs အဆင်မပြေပါ ဒီတစ်ပတ်ထပ်စီးကြည့်တယ် ပိုဆိုးနေတယ် ကားကိုမရှိတာ ရှိတော့
မထသ ကားတွေထက် ပိုကျပ်တာလား
၁၅ယောက်စီးဆိုပြီး …၂၇၀၀cc ဆိုတော့… တော်တော်မဟုတ်သေးဘူး..။
တယောက် ပေါင် ၁၅၀ ထား..။ ၁၅ယောက်ဆို.. ၂တန်ကျော်နေပြီ..။
၂၇၀၀စီစီ အင်ဂျင်.. ၂တန်ကျော်ဝန်ကို ထမ်းအောင်လုပ်ထားတဲ့ကား.. ဘာကားလဲသိချင်..။
ကမ္ဘာကြီးမှာ မြို့ပြ..မက်ထရိုပိုလက်တန်တွေ လူ.. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာ.. ရထားကိုအားကိုးတဲ့ခေတ်..။
အဲဒါကို ပြောင်းစီး.. အဆင့်မြှင့်..။
ရုံးကားစီးနေလို့ တော်လှန်ရေးထဲပါဝင်ခွင့်မရတဲ့ပြင် ကိစ္စများမြောင်လူတို့ဘောင်မှာ ခုရက်တွေထဲ အမေဆေးရုံတက်ရ ယောက္ခမဆုံးဆိုတော့ အရေးကြောင်းရှိ တက်စီဖြစ်ရော… ဒီတော့ တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင် ပေါင်မုန့်မရှိလို့ ကိတ်မုန့်စားနေရပါတယ် ဖြစ်တော့မယ်…
သာဓု သာဓု သာဓုပါ
ကံဆိုးချက်တာမွေကနေလသာကို အခမဲ့နဲ့တခါမှမတွေဘူး :'(